Uwe mmanya mmanya na-agbakwunye nke kacha mma - Ụdị
Ime Ụlọ Na-Enwu Ọkụ
Uwe mmanya na-agba mmanya kacha mma maka ịzụ ahịa ugbu a
Foto nke Anastasia Garcia sere
Uwe mgbakwasa pụrụ iche na-adịkarị obere ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche mgbe ịchụ nta ịchọta uwe adịghị amị mkpụrụ ma ọ bụ mgbe nsonaazụ ya adabaghị ma n'otu ụdị ahụ na-agwụ ike, nke na-enweghị mmụọ, n'agbanyeghị ụdị ọmarịcha oge. Agbanyeghị, dị ka ụmụ nwanyị na-eyi nha 12+, ebe ha na-aga maka mmanya- na ịzụ ahịa oriri na ọ offerụ offerụ na-enye nhọrọ nke na-enyefe oke dị ka ha na-eme n'ọtụtụ usoro na-eme ememme dị iche iche. Na ndị na -aga oriri.
Ọkacha mmasị gụnyere ụdị nke na-echekwa ụfọdụ silhouettes nke ihunanya na nha agbatịkwuru ọhụrụ, yana nkọwa dị elu banyere ụdị ọgbara ọhụrụ, nke mara mma na akwa mara mma. Ma ị bụ onye na -eyi uwe ojii Black Black na -enwe obi ụtọ ma ọ bụ onye nwere mmasị na ihe kachasị mma, nke a bụ ebe ịzụ ahịa mgbe ị mechara RSVP'd.
Ngwa niile egosipụtara na Glamour bụ ndị editọ anyị họọrọ n'onwe ha. Agbanyeghị, mgbe ịzụtara ihe site na njikọ njikọta ahịa anyị, anyị nwere ike nweta kọmpụta mmekọ.
Anthropologie Lucienne Off-the-Jirinụ Maxidress
Ọ na -adị m mma. Ọ bụ uwe nkwupụta zuru oke. Ọ dabara nke ọma. Anaghị m eyi ọtụtụ uwe mwụda ogologo n'ihi na ha nwere ike nwee mmetụta na -egbochi, mana slits na enyemaka a ma gbakwunye mmetụ dị mma. Ọ bụ obere oge. - P.S. Kaguya , size 16, New York City
ukwu akwa ukwu bikini ala
$ 180 Ọmụmụ ihe gbasara mmadụ Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 2/11
Tanya Taylor Ifuru Kechie Minidress
Uwe Tanya Taylor na -amasị m. A na-eji ihe ndị mara mma dịka silk na linen mee ha, ihe nbipụta ejiri aka see pụrụ iche. Kwesịrị ekwesị na ọdịdị dị mma n'ọtụtụ ụdị ahụ, ọ na-adị m ka ụdị mkpuchi faux enweghị oge zuru oke nke na ndị a ga-abụ ihe eji edozi ụlọ ruo ọtụtụ afọ. - Allison T. , nha 18/20, Orange County, California
$ 495 Nordstrom Zụta ugbu a
mbọ piich agba na imewe
Site n'ikike ika 3/11
Uwe ụbọchị Eloquii Sparkle Maxi
Enweghị m ịzụta uwe mmanya mgbe mgbe, mana mgbe m mere ya, Eloquii bụ ihe m na-aga. Akara ahụ na -eweta okpomọkụ mgbe ọ na -abịa n'ụdị ọhụrụ, nkọwa na -atọ ọchị, na agba agba. Ọkacha mmasị m nke m nwalere n'oge na-adịbeghị anya bụ uwe mwụda mara mma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-ọ nwere ndepụta nchere mmadụ 5,000! - Lauren B., nke dị 24, New York City
$ 169.95 Eloquii Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 4/11
Dress Jason Wu Silk Charmeuse Uwe ogologo uwe aka
Fabrickwà ahụ dị nnọọ okomoko, ụcha ya bara ụba ma maa mma. - Samhita Mukhopadhyay ., nha 16/18, New York City
$ 1,950 11 Nsọpụrụ Zụta ugbu a
Uwe a na -agba mmiri nke Torrid na akwa Peplum Midi Dress
Enweghị m ọtụtụ oge iji yi uwe mmanya, mana mgbe m hụrụ nke a, m ga -enwerịrị ya. Okwesiri maka mmemme ọrụ ma enwere m ike iyi ya n'abalị ụbọchị! —Maggie T., nha 18/20, Everett, Washington
$ 74.90 Torrid Zụta ugbu a
Anthropologie Antoinette kụrụ akwa Midi
M ga -eyi uwe a n'oge ọkọchị. Enwere m mmasị na obere nkọwa ruffle na uwe a. Ọ na -enye ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụ azụ azụ. —P.S. Kaguya, nha 16/18, New York City
esi etinye ihe mkpuchi mkpuchi duvet
Zụọ uwe a na ihe ndị ọzọ Ụgwọ Ụtọ maka ego azụ.
$ 220 Ọmụmụ ihe gbasara mmadụ Zụta ugbu a
netflix nwụrụ anwụ nye m nkedo
Site n'ikike ika 7/11
Ejiri ASOS Curve Midi na akwa Batwing na Kechie n'úkwù
Aka ASOS gbadara nwere uwe mmanya kacha mma. Ị nwere ike ịhọrọ site na sequins, ruffled, textured - ọtụtụ ụdị dị iche iche. Nke kacha amasị m ugbu a ga -abụrịrị akwa akwa akwa satin green. - Nadia aboulhosn , nha 12/14, Los Angeles
$ 72 Asos Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 8/11
Oge pụrụ iche nke Torrid Black Lace Midi Dress
Ọ masịrị m na Torrid chere echiche niile gbasara uwe a - enwere m mmasị na lace. Ọ na -amasịkwa m na ọ na -ezo aka m. —Lisa T., nke dị 20, Freehold, New Jersey
$ 128.90 Torrid Zụta ugbu a
agba ntutu kacha elu maka 2015
Uwe Eloquii Puff-Sleeve Blazer
Eloquii bụ n'ezie ihe m na-aga maka emume ọ bụla! Ọ na -adị mgbe niile na usoro. - Hunter McGrady , size 18, New York City
$ 129.95 Eloquii Zụta ugbu a
Uwe mkpuchi akwa ụbọchị LPA
LPA nwere akwa mara mma nke nwere ezigbo mma. - Yvonne Simone , size 12, New York City
$ 148 LPA Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 11/11
Uwe akwa pensụl Cushnie Black Square
Ahụrụ m n'anya Cushnie maka uwe mara mma. Ịrụ uwe ya enweghị ntụpọ na akwa dịkwa, nke na -eme oge anwansi. - Denise Bidot , size 12, New York City
$ 1,496 11 Na -asọpụrụ Zụta ugbu a
M na -enyere ndị mmadụ aka ịhọrọ mgbaaka agbamakwụkwọ maka ibi ndụ. Nke a bụ otu m siri chọta nke m
Ọnọdụ Mmekọahụ ịsa ahụ na ndụmọdụ steamị ka a ga -anwale n'abalị a
Agbalịrị m ọgwụgwọ ọgwụgwọ ntutu isi HydraFacial Keravive maka ntutu dị mma
Oge 15 kacha gbaa egwu maka ụmụ nwanyị
Oge Ejiji 10 nke mebiri ịntanetị na 2019
Nri & Uto
ntụpọ egbugbere ọnụ kacha mma ogologo oge
na -enwe mmekọahụ na mmụọ
bụ afọ 4 nnukwu ọdịiche afọ
onyinye kacha mma maka ụbọchị nne
achọrọ m ịgbada gị